WOWOW Jikada Ganacsiga Dheriga Buuxinta Baasto Cudud Chrome-WOWOW Tubooyinka
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Qasabadaha Dheriga Weelka Foornada / WOWOW Jikada Ganacsiga Dheriga Fiilaylaha Baastada Arm Chrome
WOWOW Jikada Ganacsiga Dheriga Fiilaylaha Baastada Arm Chrome
TAYO SARE: darbiga tuubada cududda dheer ee cufan, cufnaanta sare ee naaso/ naxaas saafi ah oo la sameeyay (2.885 lb), oo aan la mid ahayn tuubooyinka kale ee raqiis ah, isticmaalka dheer ee nolosha waxaa lagu hubiyaa tayada culus,
dusha sare ee GUDAHA oo NASRIDAY, Dhibic kasta oo soo mara dheriga buuxinta waa mid dabiici ah oo caafimaad qaba, ma jirto wax dhibaato ah; dhammayn chrome ah oo qurxoon, xoog badan, aan rasaasta lahayn, daxalka u adkaysta
FAACDDA DARIGA-BUURTA OO LA LABAYNAYA: 2 valves oo loogu talagalay kontoroolka socodka labalaabka ah, tuubada labajibbaaran ee isku xiran waxay kordheysaa ilaa 20 ", tuubada birta ah waxay laalaabtaa wadada marka aan la isticmaalin. Dheriga buuxinta, cunto karinta waa sahlan tahay. Ku rakibida derbiga gaarka ah waxay u oggolaaneysaa boos dheeri ah miiska miiska iyadoo sidoo kale la siinayo gaari gaar ah.
HEERKA BIYAHA WEYNTubada isku laabma ee 2 ayaa leh aerator neoperl oo bixisa cadaadis joogto ah, socodka biyaha oo toosan. Hawo-mareenka ABS wuxuu badbaadiyaa 50% biyaha iyo kartridda dhoobada ee aan dhibicda lahayn.
Rakibaadda FUDUD ee Xiriiriyaha: cabbirka dunta tubooyinka jikada ee bilaashka ah waa 1/2" NPS, waxaana lagu qalabeeyaa 1/2" NPS ilaa 1/2" NPT xiriiriye, ISTICMAALKA BIYO QABOW KALIYA.
DAMMAAN, TAAGEERADA Macaamiisha: 5-sano oo dammaanad ah iyo taageerada macaamiisha waqtigeeda ayaa la bixiyaa. Waxay daboolaysaa soo celinta xaddidan ee 90-maalmood. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan nagala soo xiriir dalabkaaga.
WOWOW Jikada Ganacsiga ee qasabada dheriga buuxinta baasto cudud Chrome
Qashin-ka-kariyaha dheriga karsan ee jikadaada jikada 2311100C
Qubeyska foornada dheriga ah waa tubada ficil-ka-beddelidda ee jikadaada muddo dheer, gacanta la garaacaayo. Caadi ahaan tubbada buuxinta dheriga ayaa lagu dul qariyey foornada jikadaada. Sidan ayaad u awoodaa inaad dheriga biyo ka buuxisid, inta ay ku dhegan yihiin foornada mar hore. Sidan oo kale uma baahnid inaad dheryo culus ka buuxsato saxanka jikadaada jikadaada jikadaada jikada. Tuubooyinka wax lagu buuxiyo ee digsiga dhaqameedku waa inaysan lagu khaldin tuubooyinka kale ee jikada jikada oo leh gacan ku go'an. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya tubada buuxinta dareeraha iyo tubada jikada ee jikada lagu daro waa biyo diirran. Xilliga qasabada biyaha lagu buuxiyo ayaa keliya hal biyo qabow loo baahan yahay. Laakiin dabcan waxaad si fudud isugu dari kartaa tubada buuxinta dareeraha qubayska iyo weelka jikada ee jikada lagu daro si loo gaaro wada noolaanshaha kama dambaysta ah ee naqshadda jikadaada.
Markaad naqshadayso jikadaada, marka hore waxaad badanaa ka fikirtaa sida jikadaada riyadu ay u ekaato. Laakiin waxaa laga yaabaa in ka sii muhiimsan tahay shaqeynta jikadaada cusub ee riyada. Waa inaad ka fikirto sida aad wax u karsatid, nooca qalabka aad u baahan tahay, halka aad uga baahan tahay ilo iftiin leh, iyo sida aad si fudud ugu ilaalin karto jikadaada. Qalab kasta oo ka mid ah qalabkaaga jikada waxaa ku yaal xulashooyin kala duwan. Tani waxaa lagu tirinayaa qasabadaada jikada sidoo kale. Laakiin dhinac inta badan la ilaaway, waa shaqadii ugu dambaysay ee qasabadda buuxinta baastada gacanta baastada. Si fudud maxaa yeelay si ballaaran looma yaqaan. Dhinaca kale tuubada jikada ee noocan ahi waxay noloshaada ka dhigi kartaa mid aad u fudud markaad wax karinayso.
Maxaad ugu baahan tahay qasabad buuxinta dheriga jikada?
Qeybta ugu weyn ee baastada gacanta baastada ayaa ah inay kaa badbaadin karto inaad sidato weel culus oo biyo ka buuxaan saxanka jikada ilaa jikadaada jikada. Tani waxay si gaar ah faa'iido weyn kuugu noqon kartaa adiga markii aadan qaadi karin ama aadan rabin inaad alaab culus sidato. Qaadida dheriyada culus waxay ku keeni kartaa culeys gacmahaaga, gacmahaaga iyo dhabarkaaga. Taasi waxay noqon kartaa mid aan ku habbooneyn markaad horeyba uga dareemaysid xanuun dhabarkaaga ama gacmahaaga. Ka sokow, waxay dhici kartaa in dheryaha waaweyn aysan ku habboonayn saxanka jikadaada. Sababtaas awgeed waxay caqabad ku noqon kartaa in dheri weyn biyo laga buuxiyo.
Waxaad kala dooran kartaa laba ikhtiyaar oo aasaasi ah markay timaado qasabadaha buuxiyo dheriga. Waxaa jira qasabado isku dhafan oo isku dhafan oo laba jibbaaraya. Waxay kuxirantahay cabirka makiinada wax lagu kariyo ee jikada midkee sida ugu fiican kaaga shaqeyn doonta. Haddii aad haysatid shooladda jikada oo leh gubiyayaal badan, tuubada buuxisa dheriga oo leh laablaabyo isku dhafan ayaa sida ugu fiican ugu shaqeyn doonta sababtoo ah gaaritaankeeda. The WOWOW Casriga Farmhouse Pot Filler Faucet Polished Chrome wuxuu ku siinayaa gacan laba laab leh wadarta wadarta 20 inji. Qalabkan buuxinta dheriga dhaadheer waxaad ku gaari kartaa qayb kasta oo ka mid ah shooladda jikadaada sidaas darteedna waxaad ku helaysaa raaxada ugu badan
Waxyaalaha qasabada wax lagu kariyo ee baastada gacanta lagu buuxiyo
Tuubada buuxisa dheriga ee WOWOW aad ayey u anfacaysaa gacanteeda isku dhafan, maadaama aad gacanta gabi ahaanba dib ugu laaban karto darbiga shooladda. Sidan oo kale boos ka qaadan mayso jikadaada umana muuqan doonto wax aan fiicnayn. Qaabdhismeedka la qabsiga awgood waxaad u keydin kartaa booska jikada ee qaaliga ah. Qasabadan buuxinta dheriga oo tayo sare leh ayaa la dhigi karaa si loo ixtiraamo naqshadda qurxan ee jikadaada qurxinta leh. Si dhib leh kuma ogaan doontid tuubada buuxisa dheriga darbigaaga!
Dad badan ayaa ka baqaya in tuubada wax buuxisa ee dherigu ay soo daadato oo ay waxyeelo u geysato biyaha jikadaada. Si ka duwan qasabadaha saxanka jikada, biyaha daadanaya waxaa qabsan karaya jikada. Iyada oo qasabada wax lagu buuxiyo ay biyuhu ku dhici karaan jikadaada ama miiska jikada. Ugu dambayntiina sagxadda jikadaada oo laga yaabo inay waxyeello u geysato. Sababo amni awgood, qasabadaha buuxiya dheriga waxaa badanaa lagu qalabeeyaa laba kabaal. Sidan ayaa qasabada qasabada ee filtarka laba jibbaaran looga ilaaliyaa dhibcaha. Gacanta la dheereeyey ee WOWOW qasabadda buuxiyaha dheriga ayaa leh laba waab oo loogu talagalay xakamaynta socodka socodka. Markaad dhamayso karinta, waad iska xirtaa waalka weyn sidoo kale, si aan biyo loo daadin karin. Sidaas ayaa badbaadadaada jikada loo damaanad qaaday.
Tubbada buuxinta tayada dheriga tayo sare leh
Filinka Fucet-ka ee Warshadaha casriga ah ee WOWOW Friet Fucet ayaa laga been abuuray tikniyoolajiyadda ugu casrisan. Sidan ayay WOWOW u hubisaa cabbirrada saxda ah ee dareeraha dareeraha dheryaha ee waxqabadka wanaagsan. Qulqulka tuubada dheriga ee WOWOW wuxuu bixiyaa dammaanad nolosha oo dhan ah maxaa yeelay tayo sare leh oo gudaha ah ayaa la qurxiyey. Waxay ka samaysan tahay naxaas aad u sarreeya oo naxaas ah (naxaas ah). Waxaa lagaa hubiyaa biyo nadiif ah oo la cabbo oo ka soo baxa tuubadan oo aan lahayn walxo khatar ah. Caafimaadkaagu wuxuu ka sarreeyaa waxa ugu muhiimsan! Waxba ma'aha wax soo saarkan WOWOW ayaa shahaado ku leh ISO.
Biyo fiican oo leh weelka dheriga baastada gacanta baastada
Tayada sare ee tayada-sare ee 360-digsi, waxaad ku gaari kartaa meel kasta oo waxaad ku buuxin kartaa wax kasta si fudud. Fiilooyinku waxay ka samaysan yihiin tayada ugu wanaagsan uguna fiican ee wax looga qaban karo. Waxaad isla markiiba dareentaa tayada marka aad isticmaaleyso waaliyeyaasha. Habka durdurinta dhinaca kale waxay kufiican tahay buuxinta biyaha. Waxay siisaa cadaadis joogto ah si ay u bixiso durdur biyo joogto ah. Fiilooyinka cadaadiska sare waxay ka fogaadaan inay ku daadiyaan iyo ku daadiyaan si ay kuu siiyaan raaxada ugu fiican. Taasina waa dhab ahaan waxa aad uga baahan tahay tubooyinka jikadaaga!
Tuubada dheriga dhalada ee WOWOW waxaa lagu dhammeystirey nuujin iyo nafaqeyn weel leh. Waxay leedahay dhammeystiraysa chrome nadiif ah oo heer sare ah oo ku habboon meel kasta oo jikada naqshadaynta ah. Tubada dareeraha ka buuxaa ee WOWOW waa xoq u adkeysi badan wayna fududahay in la dhaqo. Si loo ilaaliyo tubada buuxinta dareeraha ayaa sidoo kale fudud. Waad ku hayn kartaa tubbada dareeraha ah ee foornada sidii wax cusub muddo dheer. WOWOW waxay ku siinaysaa dammaanad 5 sano ah dhamaan tubooyinka ay gasho. Sababtaas awgeed waad ogtahay inaad heshay tubbada dheriga buuxisa ee ku siinaya saamiga ugu tayada sarreeya. Annaga oo haysanna 90-maalmood oo lacag celin ah oo damaanad ah, waad ku soo celin kartaa tubada buuxinta shaashadda adigoon wax dhibaato ah qabin haddii aadan jeclayn. Laakiin waxaan ognahay in taasi aysan dhici doonin. Waxaan ku kalsoonahay badeecadeenna!
Faa'iidooyinka tuubada dheriga dhoobada ku jirta oo kooban:
· Waxay siisaa walxo-kiimikaad jikada kasta
Si fudud ugu buuxi dheriyada dusha foornadaada
· Gacan ku dhaggan ficil ahaan si sahal loogu rito tuubbada dheriga
Laba-hubaysani dabacsanaanta ugu habboon
· Waxaad si sahlan kuula bixi kartaa meelaha aan la heli karin 20 inji
· Naqshadeyn cusub oo loo yaqaan 'chrome design'
· Waxay ka samaysan tahay alaab naxaas ah oo tayo sare leh
· Fudayd in la nadiifiyo oo ay fududaato in la dayactiro
· Dammaanad 5 sano ah
SKU: 2311100C Categories: Qubeyska jikada, Qasabadaha Dheriga Weelka Foornada Tags: gacanta baastada, Daboolan, Dheecaanka Dheriga, Dhagax buuran
Dheriga qasnadda buuxiya chrome
Dheriga Weelka Foojiyaha Isku Laab Labaad Chrome
Ganacsi / Makhaayad / Hoy / Gudaha
Dheriga qasabada wax lagu buuxiyo / isku xiraha NPT; Neoperl ABS jimicsi; Qalabka Fiilooyinka (Jarmal Fischer nylon barroos bool)